Izinsiza kusebenza ezihlanganisiwe Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Izinsiza kusebenza Ezihlobene
Imishini yokuqinisa igesi nokusimamisa
Isetshenziselwa ukwenza ingcindezi yegesi ihlangabezane namazinga, igcine ingcindezi ezinzile, nokuqhubeka kokuphakelwa. Isici sayo ukuphepha, kulula ukuyihambisa futhi kulula ukuyifaka, umfutho ozinzile wegesi, imishini yokulawula okuzenzakalelayo.
Ama-biogas, imishini yokuthola indle.
Ama-cubic metres ayi-100 we-biogas Torch Sethelwe ngaphambili
Ibanga lomlilo leMethane: 100m3 / h
Okuqukethwe komswakama weMethane: ≤6%
Okuqukethwe kweMethane: ≥35% -55% (Ngokuqukethwe kwe-methane kufika ku-55%, ithoshi lisha lize lifike ku-100m cubed ngehora)
Okuqukethwe kwe-Hydrogen sulfide: ≤50ppm
Ukungcola kwemishini: ≤0.2%
Iphayiphi enkulu yokuhambisa igesi ngeke ibe ngaphansi kwe-DN40 (ngaphansi kwesimo sengcindezi ye-3kpa).
Umvikeli Wengcindezi Oqondile Nobi
Imininingwane ngokuya ngesiko lesimo sangempela, okokusebenza kuhlukaniswe nge-carbon steel ne koqweqwe lwawo.
Ama-biogas, imishini yokuthola indle. Ihlukaniswe i-tank wall agitator kanye ne-tank top agitator. Izinhlobo ezahlukene namamodeli akhethwa ngokuya ngezidingo ezihlukile. Futhi okubalulekile nosayizi othile nakho kwehlukile.
Isihlukanisi esiqinile samanzi
Ama-biogas, imishini yokuthola indle. Ukwehlukaniswa okuqinile noketshezi, ukulahlwa okungcono kwemfucuza, kuyisixhumanisi esibalulekile kunqubo yokwelashwa.